magaalada Muqdisho Oo marti galisay Tartanka Gabayada Soomaliyeed… —
Home » magaalada Muqdisho Oo marti galisay Tartanka Gabayada Soomaliyeed…
magaalada Muqdisho Oo marti galisay Tartanka Gabayada Soomaliyeed…
By radiosomit.com September 21, 2021 Updated: September 28, 2021 No Comments3 Mins Read
21 Sebteembar 2021 ­­­­­­­­­­­­­­­­­–– Tartanka Gabayada Soomaalidu maanta ayuu si rasmi ah u furmay, waana abaalmarin sannadle ah oo uu qabanqaabiyay Hoyga Maansada Soomaaliyeed oo taageero ka helaya Hay’adda Qaramada Middoobay u qaabilsan horumarinta (UNDP).
Tartanku wuxuu u furan yahay qof walba oo Af Soomaali wax ku qori kara, waxaana lagu aqoonsan doonaa Abwaanka leh hal-abuurka ugu wanaagsan ee sannadka. Saddexda qeybood ee tartanku waxay kala yihiin: Gabayaaga ugu wanaagsan ee Sannadka, Gabadha ugu gabay wanaagsan Gabdhaha gabya (oo ay taageereyso hay’adda UNDP) iyo Abwaanka Da’da yar ee Sannadka (oo ka yar 25 sano). Gabayada waxaa lagu soo dirayaa bogga internetka ee Hoyga Maansada Soomaaliyeed, tartanku wuxuu xirmayaa 21-ka Oktoobar. Sannadkan waxaa Garsoorayaal ka ah abwaano isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo hadda soo kacaya oo ay ka mid yihiin Axmed Faarax Cali (Idaajaa), Cisman Cabdullahi Guure, Moxamud Xaaji Maxamed (Tarash), Caasha Maxamud Yuusuf (Caasha-luul) iyo Xawa Jaamac Cabdi.
Gabayaaga ugu Wanaagsan ee Sannadku wuxuu ku guuleysanayaa $2,000 oo doollar, Abwaaanka Da’da yar ee Sanadku wuxuu ku guuleysanayaa $1,000 doolar. Gabadha ugu gabay wanaagsan Gabdhaha Gabya waxay ku guuleysanyesaa $1,500, taasoo lagu hawlgalinayo in ay ku soo qorto lix gabay oo ay uga hadleyso arrimaha haweenka.
“Dumarka had iyo jeer waa la xaqiraa balse marnaba lama xaqiri karo maansada wanaagsan ee aanu tirino,” ayay tiri Caasha Maxamuud Yuusuf oo ka mid ah garsoorayaasha tartanka. “Hadday noqoto in aan ka hadalno nolosheena, caddaaladda, arrimaha qoyska ama riyooyinkeena, gabayada dumarku ay tiriyaan waxay kaga hadlaan arrimo muhiim ah oo u baahan in wax laga qabto, waa hadii la doonayo in aan dhisno bulsho wanaagsan oo qof walba uu horumar ka gaari karo.
“Soomaalidu wax badan ayay dunida ku soo biirin karaan oo uu Gabaygu ugu horreeyo. Waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba, yar iyo wayn, in ay ka soo qaybgalaan tartanka,” ayuu yiri Abwaan Idaajaa. Muuqaal uu Abwaanku kaga hadlayo sida tartanka looga qaybgali karo waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Hoyga Maansada.
Xafladda furitaanka tartanku waxay si rasmi ah maanta uga dhacaysaa hoteelka Jazeera ee ku yaalla caasimadda Muqdisho. Sidoo kale, xafladda lagu abaalmarinayo dadka ku guulaysta tartanka waxaa iyana lagu qaban doonaa Muqdisho 21-ka Nofeembar. Waxaa ka soo qaybgali doona fannaaniin iyo bahda hiddaha iyo dhaqanka.
“Cilmi baaris ay samaysay hay’adda UNDP ayaa lagu ogaaday in dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaaliyeed ay doonayaan in codkooda la maqlo, sidaa darteed waxaan ku faraxsannahay inaan taageerno Tartanka Gabayada Soomaalida iyo gaar ahaan qaybta lagu dhiiri- gelinayo dumarka,” ayuu yiri madaxa hay’adda UNDP, Jocelyn Mason. “Waxaa jira haween badan oo hibo u leh qoritaanka Af Soomaaliga, waxaan rajaynayaa inaan garab ku siino in codkooda la maqlo si ay u soo bandhigaan hammigooda, iyo dalabkooda ay ku doonayaan in la dhawro xuquuqda haweenka Soomaaliyeed.”
Tartanku wuxuu qayb ka yahay barnaamijyada Hoyga Maansada ee ay taageerayso hay’adda UNDP si loo horumariyo suugaanta Soomaalida, xuquuqda haweenka iyo nabadaynta.
Horraantii sannadkaan ayaa la soo bandhigay bogga internetka ee Hoyga Maansada (www.hoygamaansada.com)
Bogga internetku wuxuu kaydiyaa gabayadii hore iyo kuwo cusub oo ay tiriyeen abwaanada jiilka cusub. Sido kale, waa bar lagu daabaco warar la xiriira gabayada, laguna soo bandhigo maqaallo, wareysiyo, bandhigyo islamarkaana aqoon laga kororsado. Hoyga Maansadu wuxuu qabanayaa munaasabado gaar ah wuxuuna shaqo gelinayaa abwaanada si ay u soo qoraan gabayo cusub oo loogu qabto bandhigyo iyo aqoon is-weydaarsiyo dhanka dhaqanka ah.